Ogaden News Agency (ONA) – Dumar Sadex Ah oo Muuqaalkii Maraykanka Wax Ka Bedelay.
Dumar Sadex Ah oo Muuqaalkii Maraykanka Wax Ka Bedelay.
Posted by Dayr	/ February 23, 2019
Ilhaan Cumar, Alexandria Ocasio-Cortez, iyo Rashida Tlaib waxaa lagu soo doortay doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka ka dhacday bishii Novemberee sannadkii hore ee 2018.
Dabcan shaqada way ku cusub yihiin laakiin taas kama aysan hor istaagin iney qabsadaan hadal heynta baraha bulshada. Saddexdan dumarka, ee dhawaan ku biiray golaha wakiillada dalka Mareykanka ee Koongareeska ayaa abuuray isbaddal weyn oo ku dhacay wajigii ay lahayd siyaasadda dalkaas.
Dhammaan saddexdan haweenka ah waxay guusha doorashada kuraastooda usoo hoyiyeen xisbiga Dimuqraaddiga. Inkastoo ay saaxada siyaasadda heerkeeda sare ku cusub yihiin, hadda waxay xilli horeba awood u yeesheen iney baddalaan qaab dhismeedkii siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka.
Ilaa iyo hadda waxay kasbadeen taageerayaal aad u faro badan oo ku garab taagan ficil walba oo ay ku dhaqaaqaan iyo hadal kasta oo ay ku dhawaaqaan. Siyaasiyiin taariikh sameeyay
1- Alexandria Ocasio-Cortez: Gabadhan oo ay da’deedu tahay 29 sano, waxay noqotay qofkii ugu da’da yaraa ee abid ku biira aqalka Koongareeska Mareykanka, halkaasoo ay isugu tagaan siyaasiyiinta ugu waaweyn Mareykanka.
Gabadhan oo horay uga shaqeyn jirtay makhaayad waxaa laga soo doortay gobolka New York waxayna asal ahaan kasoo jeedda jasiiradda Puerto Rico. Waxay aad ugu caan baxday hadalladeeda codka dheer ee ay ku gil gishay siyaasadda waddanka uu madaxweynaha ka yahay Donald Trump.
2- Ilhaan Cumar: Waa 38 jir, waxaana laga soo doortay gobolka ay Soomaalida badan daggan tahay ee Minnesota. Waa gabar Soomaali-Mareykan ah, Muslimad ah, oo xijaabka xidhata, waxayna Dalka Mareykanka iyadoo qaxooti ah tagtay sannadkii 1995-kii. Doorashadii xilliga dhexe ee mareykanka ka dhacday bishii November waxay iyada iyo gabadha ay koongareeska iskula biireen ee Rashida Tlaib ka noqdeen gabdhihii ugu horreeyay ee muslimiin ah ee abid ka mid noqda aqalkaas.
3- Rashida Tlaib: waa 42 jir muslimad ah oo laga soo doortay gobolka Michigan, waxaana loo arkaa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu hadalka adag ee ku jira Koongareeska. Tlaib oo qareen ah waxay ka soo jeeddaa dalka Falastiin waxayna ayeeyadeed iyo qaraabadeeda kaleba ilaa hadda ku nool yihiin dhulka ay Israa’iil heysato ee Daanta Galbeed.